Manchester City Iyo Manchester United Oo Ku Dagaallami Doona Harry Kane Xagaagan?
HomeHoryaalka IngiriiskaManchester City iyo Manchester United oo ku dagaallami doona Harry Kane xagaagan?
April 10, 2021 Horyaalka Ingiriiska, Suuqa kala iibsiga, Wararka Ciyaaraha Maanta 0
Manchester City iyo Manchester United ayaa lagu soo waramayaa inay isku wajihi karaan saxiixa weeraryahanka Tottenham Hotspur Harry Kane inta lagu guda jiro suuqa kala iibsiga xagaagan.
27 jirkan ayaa markale qaab ciyaareed cajiib ah ku soo qaatay Spurs intii lagu jiray ololihii 2020-21, isagoo dhaliyay 29 gool isla markaana diiwaan geliyay 16 caawin 41 kulan oo uu saftay tartamada oo dhan
Kane wali wuxuu heystaa in ka badan seddex sano qandaraaskiisa Tottenham Hotspur Stadium, laakiin sida laga soo xigtay The Athletic , wuxuu doonayaa inuu dhaqaaqo xagaagan haddii Spurs ay ku guuldareysato inay u soo baxdo Champions League xilli ciyaareedka soo socda.
Kooxda Jose Mourinho ayaa laga reebay Europa League bishii hore, taasoo la micno ah inay ku dhameysan doonaan afarta kaalin ee sarre ee Premier League si ay uga qeyb galaan xilli ciyaareedka soo socda hoggaanka horyaalada Yurub.
Sida ay hadda tahay, kooxda North London ayaa ku jirta booska lixaad ee kala sareynta , saddex dhibcood ayay ka danbeeyaan kooxda kaalinta afaraad ee West Ham United, ka hor kulanka axada ee Man United.
Warbixinta ayaa sheegeysa in Man City iyo Man United ay labaduba xiiseynayaan saxiixa kabtanka England waxaana laga yaabaa inay ku dagaallamaan adeegiisa suuqa soo socda.
Kane, oo la sheegay inuu dib u dhigi doono go’aankiisa mustaqbalkiisa ilaa ka dib Koobka Qaramada Yurub ee xagaagan, ayaa sidoo kale la rumeysan yahay inay xiiseynayaan Barcelona iyo Real Madrid.